Indawo emaphakathi | Nethezeka ku-♥ yasenkabeni yedolobha
Jabulela i-Cluj-Napoca, inhliziyo yaseTransylvania, kuleli fulethi elithokomele, emizuzwini engu-3 nje ukusuka ezindaweni ezimaphakathi zase-Cluj.
Indawo isanda kulungiswa inazo zonke izinsiza ezidingekayo ukuze izivakashi zethu zizizwe zisekhaya.
Yindawo ekahle ongaba kuyo uma useholidini, uhambo lwebhizinisi noma uvakashele abangani bakho.
★Lesi studio esithokomele sitholakala esitezi sokuqala sebhilidi lekhulu le-18.
★ Isakhiwo sitholakala enkabeni yedolobha, sizungezwe izinto ezikhangayo ezinkulu zezivakashi, okukuvumela ukuba ujabulele ubusuku obuhle, izindawo zokudlela ezihamba phambili nama-pubs khona kanye phakathi kwedolobha.
★Istudiyo sinekamelo elilodwa, indlu yokugezela kanye nekhishi elihlome ngokuphelele.
★ Igumbi libanzi kakhulu, linombhede wendlovukazi onethezekile ne-memory foam mattress topper, ukuze ukwazi ukulala kahle.
★ Kukhona nendawo yokudlela kanye ne-smart TV engu-80cm ene-NETFLIX, Spotify kanye neziteshi eziningi ze-TV.
★ Ikhishi lihlome ngokugcwele ngakho konke ongase ukudinge: ifriji, ihobhu, umshini wekhofi, i-toaster, i-cutlery, izitsha zasekhishini, amapuleti, izibuko, amabhodwe, njll.
★ Indlu yokugezela inamathawula ahlanzekile, izinto zokugeza, ilineni kanye nokomisa izinwele.
★ Futhi umshini wokuwasha kanye nensimbi onawo. Ngingaphinde ngikunikeze izinsiza zokomisa izingubo.
★ Ukushisisa kulula kakhulu ukukusebenzisa, ngakho ungasetha izinga lokushisa olifunayo ngokushintsha kwenkinobho.
★ I-inthanethi Nemidiya
Izwa i-inthanethi ye-fiber optic esheshayo nge-Wi-Fi futhi upheqa eziteshini eziningi ze-TV
★ Lesi yisakhiwo esingabhemi. Kukhona ithala elincane elingaphandle, engadini yangaphakathi yokubhema nokujabulela umoya ohlanzekile.
★★★ Uma ufuna ukuhlala isikhathi eside, ungaba neSEphulelo ESIKHULU :)
✔ Amahora okuthula angemva kuka-10PM
✔Noma yiluphi uhlobo lwezikhathi zokuthwebula izithombe zentengiso lwenziwa kuphela ngemuva kwesivumelwano somnikazi futhi lungaphansi kwemigomo nemibandela ethile (kungasebenza izindleko ezengeziwe)
✔ Izivakashi zinesibopho sokukhokha izindleko zokubuyisela izinto ezilahlekile nezilimele ngesikhathi sokuhlala kwazo.
✔ Izivakashi zibophezeleka ngokugcwele ngomonakalo, ukulimala, noma ukulahlekelwa okwenzeka emagcekeni nasezikhungweni zawo.
✔ Ukubhukha ukubhukha kwenza isivumelwano sokuthobela Imithetho Yendlu. Izivakashi ezephula le mithetho zinesibopho sanoma yimuphi umonakalo ohlobene, izinkokhelo, izindleko, noma izindleko.
✔ Ngokuhlala lapha, uzojabulela ukufudumala kwendlu efakwe ngokuphelele endaweni enhle kakhulu yase-Cluj, okukuvumela ukuthi ujabulele ubusuku obuhle, izindawo zokudlela ezihamba phambili nama-pubs khona kanye enkabeni yedolobha.
✔ Izindawo zokudlela ezihamba phambili namashibhi aseduze: Da Pino, Via, casa TIFF, Baracca ,Marty,Olivo, Bujole, Toulouse, Eggcetera, Che Guevara Social Pub, Meron, Makeba, Ciao New york
✔ Futhi imitholampilo yezokwelapha nezibhedlela eziseduze
★★★ Impelasonto ayipheli e-Cluj, amaphathi apholile kusukela ngoMsombuluko kuya ngeSonto
4.89(82 okushiwo abanye)
4.89 · 82 okushiwo abanye
Eduze nendawo ungathola izindawo ezikhanga izivakashi eziphezulu e-Cluj, amathilomu, izindawo zokuphuza, izitolo, izindawo zokudlela zikanokusho, iminyuziyamu nezindawo zobuciko.
★★★ Uhlu olunezindawo zokudlela ezihamba phambili namashibhi eduze nefulethi (imizuzu engu-3-5 uhamba ngezinyawo): Da pino, Casa TIFF, Via, Ciao New York, Café Bulgakov, Makeba, Baracca, Insomnia, Zama, Che Guevara Pub, Meron, Enigma
★★★ Izindawo ongazivakashela e-Cluj: Union Square, Cluj-Napoca National Theatre and Opera, The Art Museum of Cluj-Napoca, Cluj Arena (indawo yase-Untold), i-Fortress Hill, Eroilor Boulevard, Botanical Garden, Etnographical Museum of Transylvania , i-Bánffy Palace, i-St. Michael`s Church.
★★★ Indawo ezungezile ye-Cluj iyahlaba umxhwele: Imayini yeTurda Salt, i-Turda Gorge Natural Reserve, i-Banfy Castle, i-Hoia-Baciu the Haunted Forest, i-Baisoara Mountain Resort, iLake Tarnita;
Ungangithola nge-imeyili, ku-whatsapp